OnLeak uye StuffTV sefa imwe 360D 3º inopa yeiyo iPhone 7 Plus | IPhone nhau
OnLeak uye StuffTV sefa imwe 360º 3D inopa yeiyo iPhone 7 Plus
Natova nekudonha kwakawanda kwezvirongwa zve iPhone 7 Plus, Ndinofunga chinhu chega chinoshaikwa ndeye mharidzo yaro yepamutemo, chimwe chinhu chichaitika, kana pasina zvinoshamisira, munaGunyana. Zvekare zvakare, OnLeaks yanga ichitungamira, ino nguva neStuffTV, kusefa nyowani 360º 3D inopa yeiyo iPhone 7 Plus, kunyangwe panguva ino ichionekwawo kumberi. Asi usafunge kuti iwe uchaona kuti iyo skrini ichafamba sei; chii vhidhiyo iyo OnLeaks yakatumira neStuffTV inoratidza iyo dzimba kubva kumativi ese, asi isina chinhu.
Nhau idzi zvakare kuti hapana (nyowani) nhau. Vhidhiyo inoratidza zvakataurwa mumazuva achangopfuura: inotevera iPhone haizove nehedhifoni chiteshi, saka tichafanira kushandisa Mheni kana mahedhifoni eBluetooth (iwo anouya mubhokisi achave akaita sei?). Kuenderera mberi nezvisina iyo iPhone 7 Plus (senge 4.7-inch modhi), mutauri wechipiri haakoshesiwo, saka modhi nyowani inotarisirwa kunge iine imwe chete senge ese mamodheru anoratidzwa kusvika zvino.
Yakafirita imwe 360º 3D inopa yeiyo iPhone 7 Plus
Zvatinoona pano uye mune mimwe mifananidzo yakaburitswa munguva yakapfuura kuvepo kweiyo Smart Connector. Pane iyo iPad Pro, Apple inoshandisa iyo Smart Connector kubhadharisa kana kugadzirisa iyo Smart Keyboard. Iyo iPhone yaizoishandisa nei? Ini ndinongogona kutaura kuti ndinovimba haina kusanganisira yakafanana keyboard.
Yekutanga kubatana pakati pe @OnLeaks uye @StuffTV! IPhone 1 Plus / Pro Nyaya (Kurume Kwayedza Yuniti) Vhidhiyo Yekushanya http://www.stuff.tv/news/exclusive-what-apple-iphone-7-plus-will-look
Pawebsite yeStuffTV vanoti chimwe chinhu chinondibata: «Hongu, zvinoita sekunge 2016 ichave iri gore reiyo modular foni«. Handikwanise kufungidzira Apple ichivhura foni ine akasiyana accessories izvo zvataizofanira kutakura mune fanny pack kana chimwe chinhu chakafanana, asi iyo iPhone 7 Plus inotarisirwa kuve iripo zvimwe zvishongedzo izvo 4.7-inch modhi isingazokwanisa kushandisa, sezvo ivo vaizobatanidzwa kune iyo Plus modhi kubva kuSmart Connector.
Zvine musoro, kuti iyo Plus modhi ndiyo inochengeta ese mashandiro uye zvishongedzo chinhu icho vashandisi vanosarudza foni ine yakati rebei skrini havadi. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » OnLeak uye StuffTV sefa imwe 360º 3D inopa yeiyo iPhone 7 Plus
Zvakanaka, zvinoita sekunge ichaita kunge iyo iPhone 6 ine imwe shanduko diki pane yepanyama nhanho ... Kana zvirizvo, ivo vanozo skate zvakanyanya.
Ini ndatova nezvakawanda kupfuura zvekufungidzira kuti chichava kudzokorodza kwe6, vanogona kumira zvisina maturo vobva vaidaidza iyo 6ss kana chimwe chakafanana.
Asi chiri kundipa lace iyi inyaya yezvinodiwa kune iyo yekuwedzera. Yatove panguva iyo iyo optical stabilizer yaingove neiyo chete, zvakandinetsa nekuti ini ndiri nharembozha uye iyo nhanhatu yakatoita seni kwandiri pamuganhu. Zvikuru zvekuti izvozvi ndiri kufunga kutengesa ma6s kuti ndiende kuSE. Uye zvino zvinoitika kuti zvinhu zvitsva zvinogona kuuya kubva paruoko rweye smart connector (kana kubva chero imwe nzvimbo), ingangove iyo auction yekuunganidza ma6 uye SE uye woonekana neApple neruoko rudiki, nekuti Android haina kuitika kana zvekuseka, uye Wp iri kuviga Microsoft pachayo ...
Luis D. akadaro
Iko kune yechipiri slot kurudyi, pazasi pane on / off bhatani, chii chichava basa rayo?
Pindura kuna Luis D.
Mhoro Luis. Iniwo ndakazvitarisa uye pekutanga ndakafunga kuti chingave chei, asi kana ndisina chandakataura inyaya nekuti ndiko kunoenda SIM tray.
Apple inogona kunge yatove kushanda pa iPhone ine chaiyo isina waya kuchaja
Zvinoenderana nekudzidza, Android inokundikana zvakapetwa zvakapetwa seIOS